Home Wararka Gudaha Wasiirkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta & daaqa
Wasiirkii hore wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta & daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xildhibaan Mukhtaar Maxamed Guuleed ayaa xilka wasaaradda ku wareejiyey wasiirka cusub wasaaradda Mudane Sandheere Maxamed Iftiin oo uu dhowaan xilkaas u magacaabay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen.
Wasiirkii hore ahna Xildhibaan Qaran Mudane Mukhtaar Maxamed Guuleed ayaa warbixin ka siiyey wasiirka cusub shaqadii wanaagsaneyd ee lasoo qabtay mudadii uu xilkaasi hayey isagoo ku wareejiyey Feelal ay ku jiraan dhamaan shaqooyinkii hore loo qabtay, kuwa hada socdo iyo kuwa la rajeynayo.
Wasiirkii hore ahna Xildhibaan Qaran ayaa ugu mahadceliyey wasiir kuxigeenka, agaasimaha guud, agaasime waaxeedyada, shaqaalaha kale iyo hay’adihii lasoo shaqeeyay wasaaradda xilligii uu xilka hayey isagoo ka codsaday inay sidii hore iyo kasii wanaagsan ula shaqeeyaan wasiirka Cusub ee wasaaradda.
Ugu dambeyn wasiirka Cusub ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka wasaaradda Xanaanada Xoolaha, dhirta & daaqa dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya isagoo ugu mahadceliyey wasiirkii hore halka uu soo gaarsiiyey shaqada wasaaradda sidoo kalena urajeeyay mustaqbal wanaagsan.
Previous articleXILWAREEJINTA WASAARADA AMNIGA GUDAHA KGS
Next articleDeg Deg 2 wiil oo somali ah Oo Caawa La Dilay Koonfur Afka
Kooxo hubeysan ayaa dhaawac u geystay wiil dhalinyaro ah Baledweyne.